12 | August | 2017 | Danya Wadi
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကို ကာတာ နိုင်ငံ က ဗီဇာ ကင်းလွတ် ခွင့်ပေး
By danyawadi August 12, 2017 Leaveacomment
M-Media – ပင်လယ်ကွေ့တွင် သံတမန်အကျပ်အတည်း ကြုံတွေ့နေသည့် ကာတာနိုင်ငံက နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကို ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသွားမည်ဟု ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကြေငြာလိုက်ပြီး လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အားကောင်းစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအစီအစဉ်သစ်ကြောင့် အဆိုပါ နိုင်ငံ ၈၀ မှ နိုင်ငံသားများမှာ ကာတာသို့ ၀င်ရောက်ရန်အတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သာ ပြသရန်လိုအပ်သည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ မိုဟာမက် ရာရှက်ဒ် အလ်-မာဇူရီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသည့် နိုင်ငံများတွင် ဥရောပနိုင်ငံများအားလုံး၊ တောင်အမေရိကနိုင်ငံ အများအပြား၊ ရုရှား၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ကနေဒါနှင့် အမေရိကန်အပါအ၀င် အာရှနှင့် မြောက်အမေရိကနိုင်ငံများ ပါဝင်သည်။ အာရပ်နိုင်ငံများ၌ လက်ဘနွန်သာ အဆိုပါစာရင်းတွင် ပါလာခဲ့သည်။ သို့သော် ကာတာက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် […]
ရခိုင်မြောက်ပိုင်း စစ်တပ် အင်အား ဖြည့်ဆည်းမှု အပေါ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ရာနှုံးပြည့် ကျေနပ်
ကိုရန်နိုင် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ တပ်မတော်က လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့်ချထားလိုက်တဲ့အပေါ် အပြည့် အ၀ကျေနပ်မှု ရှိပြီး ကြိုဆိုတယ်လို့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ အခုလို တပ်တွေထပ် တိုးပြိးချ ထားလိုက်တာဟာ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်နယ်အစိုးရ တာဝန် ရှိ သူတဦး ကလည်း ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်း တချို့နေရာတွေမှာ ည မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်စုံစမ်း ထားတဲ့ ကိုရန်နိုင်က ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ လုံခြုံရေးအင်အားတွေ […]
မောင်တောမြို့နယ်မှ ရခိုင်လူမျိုး တစ်ဦးကို သေနတ်၊ ကျည်ဆံ အမြောက် အများနှင့် အတူ ဖမ်းဆီး ရမိ
မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ကျော်မြဝင်း ဦးစီးသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀) နာရီခန့်အချိန်တွင် မောင်တောမြို့နယ်၊ မြို့မ အရှေ့ရပ်ကွက်၊ သစ်သီး ဝလံရောင်းသည့် ဆိုင်တန်းအနီးနေ ရခိုင် လူမျိုး ဦးထွန်းထွန်းဝင်း (ဘ) ဦးမောင်ရွှေဖြူ အသက်(၄၀) နှစ်ကို ပစ္စတိုသေနတ် တစ်လက်၊ ကျည်တောင့် ၂၃ တောင့် တို့နှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသော ဦးထွန်းထွန်းဝင်းသည် မောင်တောမြို့နယ် ANP ပါတီ၏ မြို့နယ်ပါတီဝင်တစ်ဦး ဖြစ်သလို WY ဟုခေါ်သည့် စိတ်ကြွ စေသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ တရားဝင် သဖွယ် အကြီးအကျယ် တင်ပို့ရောင်းချနေသူလည်း […]
ရခိုင်မှာ စစ်တပ်တိုးချမှု ယန်ဟီးလီ စိုးရိမ်
12 သြဂုတ်၊ 2017 ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်အင်အား တိုးမြှင့် ချထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအပေါ် စိုးရိမ်တဲ့ အကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူ့ အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး ယန် ဟီးလီ က သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် တခုမှာပြောထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ အဓိကစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အကြောင်းတခုဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အခြေ အနေ အားလုံးမှာ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ပြီး ရခိုင်ပြည်လုံခြုံရေးအခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ဖြေ ရှင်း တာနဲ့အမျှ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစား လိုက်နာမှုရှိစေရေး အစိုးရအနေနဲ့ အာမခံချက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း မစ္စယန်ဟီးလရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလက မောင်တောနဲ့ ဘူးသီးတောင်မှာ နယ်ခြားစောင့် ရဲစခန်းသုံးခုကို တိုက်ခိုက် ခံရပြီးချိန်၊ နိုဝင်ဘာလ မှာ […]
Special Rapporteur on the human rights situation in Myanmar Yanghee Lee. UN Photo/Jean-Marc Ferré 11 August 2017 – A United Nations human rights expert has expressed alarm over reports that an army battalion has flown into Rakhine state in western Myanmar to help local authorities boost security in the region. “This development, which reportedly took […]
By Al Jazeera August 10, 2017 Denied citizenship, forced from their homes, and subjected to cruelty; we investigate the plight of Myanmar’s Rohingya. Filmmakers: Salam Hindawi, Ali Kishk, Harri Grace Myanmar, formerly known as Burma, hasapopulation of around 51 million people. The Burman ethnic group constitutes around two-thirds of this figure and controls […]
The Rohingya silent abuse